China kugadzirwa kwemaitiro esimbi oxide yero vagadziri uye vanotengesa | Shencai Rangi
Iron oxide yero iri yakajeka hupfu yero pigment. Kuwanda kwehukama kwaive 3.5. Makemikari zvimiro akatsiga. Saizi yechinhu iri 0.01-0.02 μ M. Iyo ine yakakura yakatarwa nzvimbo yepamusoro (ingangoita gumi yenguva yakajairika yesimbi oxide), yakasimba yekudyiwa kweultraviolet, kuramba kwechiedza, kuramba mumhepo uye zvimwe zvakanaka zvinhu. Iyo firimu iri pachena uye ine yakanaka zvivakwa. Nzira yekugadzira iron oxide yero?
Maitiro: ferrous sulfate oxidation nzira: sulfuric acid inopindirana nesimbi mafirita kuti iumbe ferrous sulfate. Sodium hydroxide inowedzerwa uye mweya unoshandiswa kuisa oxidize kugadzirira kristaro nucleus. Ferrous sulfate uye iron machipisi zvinowedzerwa mukumiswa kwekristaro nucleus, inopisa uye inoputirwa mumhepo yeiyo oxidation. Ferric oxide yero inogadzirirwa nekumanikidza kusefa, kusuka, kuomesa uye kukuya.
FeSO4 · 7H2O + O2 → 2fe2o3 · H2O ↓ + 4h2so4 + 2H2O maitiro ekuita: wedzera 74g machipisi echisimba mu1000ml 15% sulfuric acid kusvikira simbi machipisi yanyangarika, uye gadzira ferrous sulfate ine kusangana kweanenge 200g / L. Inokwana 30% sodium hydroxide iri yakawedzerwa mune yakasanganiswa sulphate solution, uye 40% yesimbi yakazara inoshandurwa ikava ferrous hydroxide [Fe (OH) 2] nekuramba ichikurudzira, uye iyo simbi inosanganiswa kuF Fe kuti iite kristaro nucleus pa30 ~ 35 ℃. Ipapo 90 g / L mafirita esimbi akawedzerwa kumusanganiswa kuti aumbe 7 g / L sekristaro nucleus uye 40 g / L ferrous sulfate, uye ndokuzopisa kusvika 85 ℃ yemhepo oxidation nekumhanya kwe600 L / h ye64 h, uye yobva yasvinwa, kugezwa, kuomeswa uye kupwanywa kuwana hydrous ferric oxide yero